Sida Loogu guuleysto Ruqsadda Cannabis - La-taliyayaasha Canna ee Codsiyada Ku guuleysta
Sida loogu guuleysto Ruqsadda Cannabis oo la yeelato la taliyayaasha Canna
Marabtaa inaad ku guuleysato Liisanka Xashiishka?
Sideen ugu guuleysan karaa Shatiga Xashiishka?
Waa xilli codsi ee Illinois waana tartanku waa mid daran! Iyada oo keliya 75 liisanka lagu bixiyo, dhibic kasta ee codsi ayaa lagu tiriyaa. Dalbashada laysanku waa qaali, tartan, badanaana kiisaska waa fursad hal mar ah. Toddobaadkan Miggy iyo Tom waxaa ku biiray khabiir Jay Czarkowski, oo ah Aasaasaha Aasaasiga ah ee La-taliyayaasha Canna, si looga wada hadlo sida saxda ah ee loo baahan yahay in la helo codsi guul leh. La-taliyayaasha Canna waxay leeyihiin taariikh la yaab leh oo ah soo saarista dalabyo guuleysta macaamiishooda. Baro waxa ka dhigaya codsiyada guuleysiga toddobaadkan qaybta:
Waa maxay La-taliyayaasha Canna?
Hay'ad la talisa ganacsiga cannabis oo ku takhasustay horumarinta astaanta iyo codsiyada shatiga
Wuxuu ku guuleystay codsiyooyinka 29 gobol iyo sidoo kale Guam, Puerto Rico, iyo Canada
Waxaa aasaasay Diane iyo Jay Czarkowski 2013
Ka shaqeynta Boulder, Colorado
Adeegyo noocee ah ayay la taliyayaasha Canna bixiyaan?
Koritaanka & Kor u qaadista
Sababta aad ugu Baahan Tahay La-taliye
Codsigu waa qaali, dalabka qaybinta wexey noqon kartaa tobanaan kun oo doolar
Muuqaalka muuqaalka ayaa ah mid aad iyo aad loogu tartami karo
Codsiyada way adag yihiin
La taliyayaasha sida La taliyayaasha Canna waxay leeyihiin khibrad iyo khibrad
Bilaabista Tillaabooyinka Si Loo Kordhiyo Fursadahaaga Ku guuleysiga liisanka
Soo hel hanti si buuxda u waafaqeysa
Buuxi doorarka shaqaalaha muhiimka ah
Hayso hannaan maaliyadeed oo xoog leh oo leh lacag lagu kasbaday
Lahaanshaha koox u heellan guusha ganacsigaaga iyo dalabkaaga waxay kordhin kartaa fursadaha lagu guuleysto codsi. Codsiyada waa qaali, halis ah, oo aad u adag. Koox u heellan meelaynta meheraddaada xashiishadda si ay guulo uga gaadho codsi.